Tuesday June, 02 2020 - 10:10:17
Monday June 24, 2019 - 14:07:21 in by salman abdi
wararka Kala Duwan Oo Aan Ka helayo Qasriga madaxtooyada somaliland ayaa sheegaya maalmaha soo socda uu Madaxwayne Muse Biixi Cabdi uu Samaynayo isku shaandhayn xukuumadiisa uu Ay seeftuna qaadanayso xubno ka mid ah golahiisa wasiirada.
wararka ayaa sheegaya in isku shaandhayntani ay ka dhalatay culaysyada siyaasadeed Oo Soo foodsaartay xukuumadiisa iyo shirka maalmihii danbaysay la hadal hayay inuu ka qabsoomayo magaalada burco eeXarunta Gobolka Togdheer Oo ay fooda isku dari doonaan beelaha galbeedka iyo Bariga Burco.
Shirkaasi oo ay xukuumadu isku dayday inay Joojiso, Ama Ay U Gaysato burburi Iyo Kala Qaybin iyadoo beryihii u danbeeyay xukuumadu ku hawlanayd abaabulka odayaal kasoo hor-jeesta qabsoomida shirkaazi kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay Hadalo Kala duwan saxaafada Isku Marinayay.
Odayaashan xukuumadu dhaqdhaqaajisay ayaa ka kooban labada beelood ee shirkaasi khuseeyo,kuwaas oo ay xukuumadu uga Faa,iidaysatay Ama wax u galisay qaabab isugu jira xeelado, dano iyo taloba dhaqaale iyadoona ay hada ku sugan yihiin magaalada hargaysa xubno odaayaala oo uu wasiirka arimaha gudaha Maxamed kaahin uga yeedhay magaalada burco.
Odayaaashan oo uu doonayo Inuu ka horgeeyo mid ka mid ah salaadiinta laf dhabarka u ah shirkaasi hadaba sawirka dhabta ah ee lasoo baxaya isku shaandhayntan la filayo ayaa ah hungada ay wasiirada xukuumada muuse kala kulmeen ee sababtay in muuse biixi fasaxo shirkaas.
xubanaha laga yaabo inay xasaarada shirkaasi sahayato ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin Wasiirada, macdanta, kaluumaysiga, Degaaanka, Badhasaabo Iyo hay,ado kale halka la sheegay in wasiirka arimaha gudaha,iyo qorshaynta boosaskaasi laga bedelayo,sidoo kale xubnaha la filayo inay wasiirada cusub noqdaan ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin,gudoomiyaha banka dhexe oo la filayo in loo dhiibo wasaarada maaliyada,halka sacad loo wareejinayo qorshaynta,cadaani,claahi maxamed ducaale iyo xuseen cabdi ducaale ayaa iyana la filayo inay kasoo muuqdaan kuraasta wasiirnimo.
isku soo wada duuboo xukuumada muuse biixi ayaa la filayaa inay xiliyada soo socda wajahdo mucaaridnimo adag oo laga timaada degaanada bariga iyo galbeedka,iyadoo wararka qaar sheegayaan in gobalka awdal iyo xubnaha xukuumada kaga jiraa inaanay mudooyinkii u danbeeyay inaanay isku fiicmayn.waana Sababaha soo dedejinaysa inuu madaxwayne muuse biixi soo cugto xubna uu u arko inay la wajihi Karaan xaalada siyaasadeed ee la filayo inay kasoo deristo xukuumada biixi